Umdlalo omnandi kunye okhawulezayo we-tennis obizwa ngokuba yi-Bang Bang Tennis | I-Androidsis
Uhlobo lwemidlalo yentenetya weza nomzuzu wakhe wegolide neminye imidlalo efana naleyo ye-SEGA kwaye esivumele ukuba sazi ngokusondeleyo ukuba yintoni ukubetha ibhaluni elungileyo okanye ukuwisa idrophu umchasi engenalo nethuba lokusondela kulo. Ukuzivelela kwale midlalo kude kwasikhokelela ekubeni sikwazi ukuyidlala kwiikhonsoli nakwiikhompyuter ezinamandla asezantsi, into enomdla kakhulu ngeli xesha langoku kubonakala ngathi abaphuhlisi balibele ukwenza umdlalo omkhulu wentenetya osishiya sipile. Kwi-Android sineendlela ezinomdla kakhulu, kodwa phantse zonke ngaphakathi kwento eyaziwa ngokuba yi-arcade.
Namhlanje sinomdla kakhulu ngeBang Bang Tennis ethi, phakathi kwezinye zeempawu zayo, ikwabandakanya yabadlali abaninzi basekhaya ukuze udlale imidlalo emnandi kakhulu nabahlobo bakho okanye usapho. Lo mdlalo uthatha nje ezinye zezona zinto zibalasele kakhulu kumdlalo wentenetya ukuze uzame ukulinganisa uNadal ngokuswayipha, nangona uchukumise kakhulu. Uya kuba nenkundla yentenetya kunye nomchasi wakho ophambi kwakho, nayo yonke indawo ekuchukumisayo ukuze uqalise ezo zandla zomntu uya kubuyisa ngazo izithonga emva komnye.
1 Yilahle loo backhand eyoyikekayo oza kuphumelela kuyo
2 Umxholo olungileyo wokuvula
Yilahle loo backhand eyoyikekayo oza kuphumelela kuyo
Eyona nto ibaluleke kakhulu, oomatshini balula kakhulu kwaye Zisekwe kwimpawu zomzimba ezisecaleni oya kuyibetha ngayo ibhola yentenetya. Ngale miqondiso uya kuba nakho ukuhambisa abadlali ejikeleze inkundla kwaye njengoko isenzo esenziwe ngokukhawuleza, i-backhand okanye ukubetha kuya kuba namandla ngakumbi. Ekugqibeleni, xa uwazi kakuhle umdlalo, uya kuphelela ekubeni ngumdlalo we-ping pong apho iminwe yakho iya kujongeka ngokungathi iyadanisa.
La isantya sokuhamba yenza imidlalo ibe mide kakhulu kwaye izandi zokubetha ziya kuvuma eyona ngoma yazo imnandi ukuze isingqisho sikhawuleze kakhulu. Oku kuyasikhuthaza kwaye sifumanise umdlalo oqhelekileyo ongakhangeliyo enye into oyonwabileyo. Ngokusengqiqweni, ukuba ukhatshwa, umdlalo uphumelela ngokucacileyo amanani apheleleyo, kuba ukusika kunye nomhlobo ngokusebenzisa ezo zandla kunye nokudanisa ngeminwe kunokunika amava olonwabo olukhulu kuwo onke amanqanaba, phantse ngokungathi sidlala umdlalo wokwenyani.
Umxholo olungileyo wokuvula
I-Bang Bang Tennis ine Umxholo omninzi wokuvula Njengabo bangaphezulu kwama-30 oonobumba, ngaphezulu kwe-10 yeendlela ezahlukeneyo zomdlalo okanye iindlela ezine zomdlalo onokuzonwabisa ngazo iiyure. Ungafikelela kumdlalo omnye womdlali, umdlalo wabadlali ababini okanye itumente, apho kuya kufuneka uphumelele iGrand Slam. Kukho imowudi ye-arcade apho kuya kufuneka ubethe umphathi wokugqibela ngamagunya oza kuba nawo esandleni sakho.
KukuSpanish, ke unayo umdlalo omnandi wentenetya apho ukushukuma komzimba kunye nokuskena izikrini, ngokukhawuleza okukhulu, kuya kuba ngumahluko phakathi kokuphumelela okanye ukuphulukana nomnye wabahlobo bakho.
Unayo simahla kwiVenkile yokuDlala kuGoogle ngentengiso ebonakalayo, nangona ungayisusa kwimicropayment.
I-Bang Bang Tennis isebenzisa ezinye iziphumo eziphezulu zezandi ezisenza sonwabe malunga nokuphosa eyona nto inamandla kunokwenzeka. Uyilo lwabalinganiswa luyahambelana neso sandi kwaye lusenza sijongane nomdlalo wevidiyo onika ulonwabo olukhulu kwisifundo apho sifundiswa khona iziseko zalo mdlalo. Oopopayi banikwe kakuhle kwaye ngokwemigaqo ngokubanzi ayikhathazi ndawo, ke wonke umgangatho ukuze ukonwabele ukurhweba kunye ne-arcade ekhethekileyo.
I-Bang Bang Tennis
Isantya sakho somdlalo
Ayinayo i-intanethi yabadlali abaninzi
Umthuthukisi: Imidlalo yeRaz
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Yilahle loo backhand inamandla kwaye ukhokele umdlali wakho ukuba atye ukungcola kwiBan Bang Tennis
Fumana amantshontsho amnandi abuyele eCluckles, iqonga elinobunzima obuhlengahlengisiweyo